February 4, 2011 at 1:31 at the
Okuhle ukubona umsebenzi omkhulu uqhubeke! Nje umbuzo esheshayo, ingabe zikhona izinkinga nge gzip kokucindezelwa yamakhasi elihunyushwe noma nje indlela php ngangisebenzisa?
February 10, 2011 at 12:13 at the
Angazi mayelana nanoma yiziphi izinkinga ne gzipping futhi i-plugin, izenzo plugin ye ngokuvamile kwenzeke ngaphambi gzipping zenzeka
kungase kube inkinga mina bengazi lutho, ngakho uma ungakwazi ukukhiqiza kabusha ke, Imane ithikithi e Trac yethu.
Ngisebenzisa Transposh version 0.6.6 , manje ngifuna uthuthukise kule nguqulo. Ngakho indlela engingayenza? futhi simthinta esizindeni sokwaziswa se-.
Ngithanda lokhu ama-plugin kangaka. Kodwa inkinga enkulu kudala load yakho iphezulu kakhulu iseva, futhi amasayithi ami bamiswa kwi abahlinzeki abaningi ibamba. Kule-version, Ngiyabona “Kakhulu amathuba okuba inani imibuzo database on URL lihumushekela (kusuka ezinkulungwaneni kwenye)” Futhi ngethemba ukuthi uyiqiniso.
Ungakwazi ukuthuthukisa ngokuqondile esibonakalayo yakho wordpress, noma imizamo inguqulo entsha phezu eyodwa amadala.
Ngicabanga ukuthi ukunciphisa SQL kuyosebenza kusayithi lakho njengoba usebenzisa i-url translation kakhulu.
Inhlanhla, futhi ngizwe uma xoxelani inguqulo entsha nathi
Ngithathe ahlola yakho-plug-in ukusetshenziswa ne iwebhusayithi ithimba lami futhi kuze kube manje Kungihlaba umxhwele ukuthi bungenzani… umsebenzi omkhulu!
Nginombuzo (okuyinto mhlawumbe kuyinto isicelo sici). Ingabe lo endaweni efanele ukuxhumana yona? Well, lapha-ke uya noma kunjalo:
Ingabe ikhona indlela engisabela unganciphisa nokuboniswa ngeposi ulimi olulodwa vo? Isibonelo, Ngifuna ukuthumela i-athikili mayelana umcimbi e-Brazil, kuphela isiPutukezi, abafundi bami Brazilian. Angifuni ukuthi ke sihumushelwa kolunye ulimi. Kungenzeka?
Futhi, umbuzo owodwa ngaphezulu: Ngifuna ukwengeza ezinye izithonjana zokuxhumana (facebook | Twitter | LinkedIn, njll), okuyinto isixhumanisi kuya esihambelanayo Amakhasi elihunyushwe. Ingabe ikhona indlela angikwazi ngokwezifiso nalawo ma-URL zolimi ngalunye?
Sibonga kusengaphambili usizo lwakho, futhi uqhubeka nomsebenzi omuhle.
February 19, 2011 at 12:44 at the
Thanks for the izincomo, manje imibuzo
1. Kukhona Ukugoqa ekilasini etholakalayo ukuthi “only_thislanguage” okuzokwenza ingxenye kuphela ngolimi inikezwe, ungakwazi cishe ungeze ikhodi efana wamanje tp_language meta handling kokuthunyelwe esizovumela okuthunyelwe ukuba zihambisana yilo ekilasini futhi salokho ukwenza njengoba ubufisa
2. ungasebenzisa global my_transposh_plugin into bese ulimi ngaphakathi ekufezekiseni wathi ukuguqulwa, abantu ukuyisebenzisa ngesinye ukubonisa izithombe ezahlukene zezilimi ezahlukene
Kusukela WP 3.1 ukukhulula mina kusaba Ungahlela translation: njengoba Ngibheka lokumaka yolimi (in), webste yami ukubuya ekhasini yami ulimi (French). Noma yimuphi umbono ngalokhu?
Eric "Rico" uthi
sawubona, ukunibonga kakhulu ngoba Transposh yakho ye-plugin, kubonakala ukusebenza (WordPress 3.0.5) kusayithi lami. ukuhumusha okusheshayo; kungekho ewindini elisha ukuvula “google noma ezinye” efana naleyo, Isixazululo sakho “ezingabonakali”. futhi kukho “Thola ngokuzenzakalela ulimi kubasebenzisi” kuyinto elula ! siyabonga
March 1, 2011 at 3:58 at the
Le nguqulo kungcono. Nciphisa okusezingeni eliphezulu umthwalo iseva kakhulu. noma kunjalo, ngezinye izikhathi, indawo yami ukuxhumana kwesizinda amaphutha.